खुसिको खबर – नेपालमा ह्वात्तै घट्यो कोरोना परिक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क ! - Sacho Post
खुसिको खबर – नेपालमा ह्वात्तै घट्यो कोरोना परिक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क !
२०७७ भाद्र २२, सोमबार ०३:४८ बजे
काठमाडौं । खुसिको खबर – नेपालमा ह्वात्तै घट्यो कोरोना परिक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क ! काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले नेपालमै सबैभन्दा सस्तो दरमा पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ । सरकारले तोकेको भन्दा १ हजार ९ सय १ रुपैयाँ कम शुल्कमै केएमसीले पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको हो । सरकारले अहिले कोरोना परीक्षणका लागि पीसीआर परीक्षण शुल्क ४ हजार ४ सय तोकेको छ । तर, केएमसीले एकै पटकमा २० वटा स्वाब परीक्षण गराउँने संघ सस्थालाई २ हजार ४ सय ९९ र सर्वसाधरणका लागि २ हजार ५ सय ९९ मै पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
यो शुल्क सोमबारबाट लागु हुँने केएमसीका अध्यक्ष डा.सुनिल शर्माले जानकारी दिए । ‘अहिले देशभर नै कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । सरकारले पनि माग बमोजिम परीक्षणको दायरा बढाउँन सकिरहेको छैन ।’ डा.शर्माले भने–‘कोरोनाको महामारी फैलिरहेको अवस्थामा न्यून शुल्कमा पीसीआर परीक्षण गरेर सहयोग पुर्याउँन खोजेका हौं ।
केएमसीले गत साउन १ गतेबाट पीसीआर परीक्षण थालेको हो । त्यसयता हालसम्म करिब १ हजार २ सय जनाको पीसीआर परीक्षण गरिसकेको छ । बिराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालकसमेत रहेका डा.सुनिल शर्माले भदौ १५ गतेबाट केएमसी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
त्यसयता एक साता नबित्दै डा.शर्माले तीन वटा महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छन् । अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेको दुई दिन भित्रै ओपीडी निःशुल्क गराएका डा.शर्माले अहिले कोरोना संक्रमितको उपचार हुने वातावरण पनि मिलाएका छन् ।
डा.शर्माले अहिले पुनः अर्को महत्वपूर्ण निर्णय लिदै केएमसीमा मूलूककै सबैभन्दा सस्तो दरमा पीसीआर परीक्षण गर्ने वातावरण मिलाएका हुन्
एकाबिहान सम्पुर्ण देशबासीहरुलाइ प्रधानमन्त्री ओलिले दिए महत्वपूर्ण सूचना !
कोरोनाका बेला प्रचण्डलाई ‘घरबेटी’ले दिएको तनाब !